အပြင်းထန်ဆုံး အဆင့်-၅ သို့ ရောက်ရှိမည့် မုန်တိုင်း CHOI-WAN | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
အပြင်းထန်ဆုံး အဆင့်-၅ သို့ ရောက်ရှိမည့် မုန်တိုင်း CHOI-WAN
လက်ရှိအချိန်တွင် ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်း အနောက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်း မုန်တိုင်း ၂ ခုဖြစ်ပေါ်နေပြီး အပူပိုင်းမုန်တိုင်းမှ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ရောက်ရှိလာသည့် KOPPU ဟောင်ကောင်နှင့် မကာအိုတို့ကို ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေချိန်တွင်…..
မြောက်မာရီယာနာကျွန်းနှင့် ဂူအမ်ကျွန်းတို့ကို ကျော်ဖြတ်သွားပြီးဖြစ်သည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး CHOI-WAN မှာ နောက် ၄၈ နာရီအတွင်း အပြင်းဆုံး စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးအဆင့် CAT-5 သို့ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ဟု TSR နှင့် Weather Under Ground တို့မှ ခန့်မှန်းထားကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
Powerful Typhoon CHOI-WAN (15W) approaching Super Typhoon strength…spares Saipan onadirect hit…turns northwestward. view animation
အောက်ပုံတွင်မြင်ရသည့်အတိုင်း တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး CHOI-WAN သည် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၁၄၅ မိုင်မှ ၁၇ဝ မိုင်အထိရှိရှိနေပါသည်။ အဆင့်အမြင့်ဆုံး CAT-5 သို့ရောက်ရှိလျှင် လေတိုက်နှုန်း အနိမ့်ဆုံး ၁၅၆ မိုင်နှုန်းမှ အထက်တွင်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒေသစံတော်ချိန် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက် ၉ နာရီနောက်ပိုင်း တွင် စတင်၍ အဆင့်-၅ သို့အင်အားမြင့်လာဘွယ်ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းချက်ကို mmweather ပိရိတ်သတ်များလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
Posted in Education, Weather Alert, Weather News. Tags: CHOI-WAN, tropical-storm, weather.2Comments »
2 Responses to “အပြင်းထန်ဆုံး အဆင့်-၅ သို့ ရောက်ရှိမည့် မုန်တိုင်း CHOI-WAN”
Pagan Island, Northern Mariana is in Danger !
Pagan Island is an island of the Northern Mariana Islands chain, located at 18.10°N 145.76°ECoordinates: 18.10°N 145.76°E, approximately 320 kilometers north of Saipan.
Can view more about Pagan Island here http://en.wikipedia.org/wiki/Pagan_Island
Yes, Iwo Jima also is on track CHOI-WAN
View Iwo Jima Island on Wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Iwo_Jima
« တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KOPPU အတွက် အနီရောင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI-WAN ၏ ယနေ့တိုင်းထွာရရှိသောလမ်းကြောင်းအခြေအနေ »